एक महिनामा ७२ प्रतिशतसम्म बढ्यो बजारभाउः उपभोक्ता आत्तिए, अनुगमन ‘नौटंकी’ मात्रै (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
एक महिनामा ७२ प्रतिशतसम्म बढ्यो बजारभाउः उपभोक्ता आत्तिए, अनुगमन ‘नौटंकी’ मात्रै (भिडियोसहित)
दसैँ महंगी !
नेपालीहरुको ठूलो चाड दसैं, तिहार र छठ नजिकिएसँगै बजार निकै महंगिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा र सवारी भाडा समेत बढेको छ । दसैंको सम्मुखमा बजार अनियन्त्रित महंगो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
आकासिँदो तरकारी र फलफूलको मूल्य
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको मूल्यसूचीअनुसार फलफूल र तरकारीको मूल्य एक्कासी अचाक्ली बढेको छ । बढी प्रयोग हुने तरकारी र फलपूलको एक महिनाअघि र अहिले मूल्य सूची हेरौं ।
एक महिनाअघि मूल्य(प्रतिकेजी) – अहिलेको मूल्य (प्रतिकेजी)
सानो गोलभेँडाः ५५ रुपैयाँ – ६५ रुपैयाँ
हरियो लसुनः २०५ रुपैयाँ – २९५ रुपैयाँ
रातो आलुः ५८ रुपैयाँ – ६८ रुपैयाँ
बोडीः ६५ रुपैयाँ – ९५ रुपैयाँ
तिते करेलाः ५५ रुपैयाँ – ९५ रुपैयाँ
भुँइकटहरः १०५ रुपैयाँ – ११५ रुपैयाँ
तरबुजा ५५ रुपैयाँ – ६५ रुपैयाँ
यीबाहेक अरु फलफूत तथा तरकारीको मूल्य पनि यहीं अनुपातमा बढेको छ । चाडपर्वको मुखमा तरकारी र फलफूलको मूल्य अस्वभाविक बढ्दा निकै मारमा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
यतिसम्म कि, कुनै तरकारीको मूल्य त ७२ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, गाँजर, बन्दा, काउलीलगायत तरकारीको मूल्य केही घटेको छ । मुला, भन्टा, घिउसिमी, भटमासलगायतको मूल्य भने मूल्य स्थिर छ ।
कालिमाटीका बजारबाट बिक्री हुने अधिकांश फलफूल तथा तरकारी भारतबाट आयात गरिएको हो ।
खाद्यन्न पनि उस्तै महंगो
दाल, चामल र तेलको मूल्य पाँच वर्षमा शतप्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै एक महिनाअघिको तुलनामा पनि खाद्यान्नको मूल्य बढेको तथ्यांक छ । एक महिनाअघि एक सय १५ रुपैयाँमा पाइने सोयाविन तेलको मूल्य अहिले एक सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, १ सय ३० रुपैयाँमा पाइने सनफ्लावर तेलको मूल्य १ सय ५० भएको छ । खासगरी पछिल्लो एक महिनामा मैदा, चिनी र खानेतेलको भाउ निकै बढेको व्यवसायीको भनाई छ ।
दाल, चामल, तेल, चिनी, मैदाबाहेकको मूल्य पछिल्लो एक महिनामा त्यतिधेरै फरक परेको छैन । तर, धेरै उपभोग गर्नुपर्ने सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक बढ्दा उपभोक्ता आत्तिएका छन् ।
मासुको मूल्य पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । अहिले खसीको मासु प्रतिकेजी एक हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने कुखुराको प्रतिकेजी मासु ३ सय ३० रुपैयाँ पर्छ ।
लत्ताकपडाको मूल्य बजारैपिच्छे फरक
दशैँमा लत्ताकपडाको कारोबार बढी हुन्छ । दसैं नजिककिएसँगै राजधानीका साना–ठूला पसलमा लत्ताकपडाको मूल्य अत्यास लाग्ने गरी बढेको छ । मूल्य बढेकाले व्यपार गर्नै गाह्रो भएको व्यापारीहरुकै गुनासो छ ।
लत्ताकपडाको मूल्य पसलैपिच्छे फरक छ । पसलेहरुले मनलाग्दी मूल्यमा लत्ताकपडा बेचिरहेका छन् । उपोभोक्ता पनि पसलेले जति भन्यो, त्यति तिर्न बाध्य छन् ।
सार्वजनिक सारीको भाडा पनि बढ्यो
चाडपर्वको मुखमै सार्वजनिक सवारीको भाडा पनि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल १० प्रतिशत सवारी भाडा बढाएको छ । असोज ७ गतेदेखि बढेको भाडादर लागू भएको छ । जसबाट यात्रु मारमा परेका छन् ।
यसरी सबैथोकमा मूल्य बढ्दा आमउपभोक्ता निकै मारमा परेका छन् । सरकारले चाडबाडको मुखमा वर्सेनिजस्तै अनुगमन गरेको जस्तो गर्छ । तर, त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन ।
निष्प्रभावी अनुगमन !
नेपालीहरुको ठूला चाडपर्वहरु ः तीज, दसैं, तिहार, छठ नजिकिँदै गर्दा बजार अनुगमन गरेजस्तो गरिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा खाद्य स्टोर, होटल तथा लजदेखि स्वस्थ्य संस्था, मेडिकल, अस्पतालका क्यान्टिन, सार्वजनिक यातायात, मासु पसल र दुग्ध उद्योगमा समेत अनुगमन भएको छ । र, बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका बेइमानी सूची निकै लामो छ ।
अहिले बजारमा मनलाग्दी बढेको कुरा तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपाडको बजार मनलाग्दी भइरहँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । अनुगमन भए पनि दोषि भेटिएकामाथि कारबाही भएको उदाहरण कम छ । बजारमा विचौलियाको विगविगी भएका कारण मूल्य मनलाग्दी बढेको व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन् ।
सरकारले चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन तीव्र बनाए पनि खासै कारबाही भएको देखिँदैन । माथिको दवाव, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रूपमा मिलाउने प्रपञ्चका कारण बजारमा बेइमानी गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको आरोप अनुगमनकारीमाथि लाग्दै आएको छ । साथै कानुनमा भएको फितलोपन र कमजोरीका कारण पनि बजारमा बेइमानी गर्नेमाथि कारबाही गर्न जटिल भएको हो । कानुनअनुसार अनुगमनका क्रममा स्टोरमा भेटिएको सामान कुहिएको भेटिए पनि मुद्दा चलाउन मिल्दैन ।
बजारमा बेइमानी भएको तथ्य फेला परे पनि कारबाही गर्न कोही न कोही उपभोक्ताले उजुरी गर्नै पर्छ । जुन अभ्यास नेपालमा छैन । अनुगमनका क्रममा सिल गरेका व्यवसायिक संस्थाहरु प्नि सुधार गरेको वताएपछि सञ्चालन गर्न पाउँने कानुनी प्रावधान छ ।
यसरी बजार अनुगमनको विषयमा अनेक बहस भइरहँदा बजारमा बेइमानी गर्नेलाई जुन रुपमा कारबाही हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले बजार अनुगमन कर्मकाडी र नाम मात्रको भएको आरोप लागेको छ । तर सरकार भने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको दावी गर्छ ।
बजार अनुगमनको शैलीलाई सुधार गरिनु पर्छ । परम्परागत रुपले अनुगमन गर्दा कालावजारी गर्नेहरुले छुट पाइरहेका छन् । तर, उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले पनि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
बजार अनुगमनलाई भक्ता पचाउने र बजेट सिध्याउने मेसो मिलाउने भन्दा माथि उठेर प्रभावकारी बनाउनु यतिबेलाको खाँचो हो । बजारमा देखिएको अराजक प्रवृत्तिलाई हटाउन बजार अनुगमनसँगै कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउनु आवश्यक छ ।